Rwiyo rwekuchema machinda eIsraeri (1-14)
19 “Unofanira kuimba rwiyo rwekuchema machinda* eIsraeri 2 uchiti,‘Amai vako vaiva chii? Vaiva shumba hadzi yaiva pakati pedzimwe shumba. Yairara pakati peshumba dzine simba* uye yairera vana vayo. 3 Yakarera mumwe mwana wayo kusvika akura, uye akava shumba ine simba.+ Akadzidza kubvambura mhuka,Akatodyawo vanhu. 4 Marudzi akanzwa nezvake uye akamubata mugomba rawo,Akamuendesa kunyika yeIjipiti achishandisa zvirauro.+ 5 Amai vacho vakamirira kusvika vaona kuti hapachina tariro yekuti achadzoka. Saka vakatora mumwe mwana wavo vakamutuma uye aiva shumba ine simba. 6 Akafambawo nedzimwe shumba uye akava shumba ine simba. Akadzidza kubvambura mhuka, uye akatodya vanhu.+ 7 Akafamba-famba mushongwe dzavo dzakavakwa zvakasimba akaparadza maguta avo,Zvekuti kuomba kwake kwainzwika munyika yese yainge yava dongo.+ 8 Marudzi emumatunhu akapoteredza akauya kuzorwa naye, akatambanudzira mambure awo pamusoro pake,Uye akamubata mugomba rawo. 9 Akamukochekera nezvirauro akamuisa muchizarira, akaenda naye kuna mambo weBhabhironi. Ava ikoko, akamuvharira kuti inzwi rake risanzwikazve mumakomo eIsraeri. 10 Amai vako vakanga vakafanana nemuzambiringa+ uri muropa rako,* wakadyarwa pane mvura. Wakabereka, uye waiva nemapazi akawanda nekuti waiwana mvura yakawanda. 11 Wakava nemapazi akasimba, anokwanisa kugadziriswa tsvimbo dzevatongi. Wakakura ukareba kupfuura mimwe miti,Uye waioneka nekuti wakanga wakareba, uine mashizha akawanda. 12 Asi amai vako vakazodzurwa+ nehasha vakakandwa pasi,Uye mhepo yekumabvazuva yakaomesa michero yavo. Mapazi avo akasimba akatyorwa, akaoma,+ akapiswa nemoto.+ 13 Iye zvino vakadyarwa murenje,Munyika isina mvura uye yakaoma.+ 14 Pamapazi avo pakabva moto ukaparadza nhungirwa dzavo nemichero yavo,Uye hapana bazi rakasimba rakasara, hapana tsvimbo yeumambo yakasara.+ “‘Urwu ndirwo rwiyo rwekuchema, uye ruchaimbwa nevanhu vanenge vachichema.’”
^ Kana kuti “rwekushungurudzika pamusoro pemachinda.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “nemuzambiringa uri mumunda wako wemizambiringa.”